आत्महत्या र हत्याबीच फरक छ । कसैले अर्काे व्यक्तिको हत्या गराएमा त्यस्तो विषय कर्तव्य ज्यान मुद्दा चल्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा आत्महत्या आफैं विरुद्धको अपराध मानिदैं आएको हो ।
मुलुकमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढीरहेकै बेला पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणले मुलुधकलाई तताईरहेको छ । चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको गलासम्म पुडासैनी आत्महत्याको पासो पुग्दा राजनीति, सडक र सदन तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा गंभीर छलफल र बहस सुरु भएको छ । कानुन कार्यान्वयन निकायको त कामै भएकोले त्यसबाट यो क्षेत्र अछुतो बन्न सक्दैन ।
एकपछि अर्काे गर्दै मुलुकमा कर्मचारी र पेशाकर्मीले आत्महत्या गरिरहेको श्रृखंलाका एक पात्र हुन पुडासैनी हुन । पुडासैनी परिवारले रवि लामिछाने र उनको समूहका कारण सालिकरामले आत्महत्या रोजेको अडियो र अन्य प्रमाण भेटेको दावी गरेपछि यो विषय गंभीर मोडमा पुगेको छ । यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने चितवन जिल्ला अदालतबाट पाँचदिनको म्याद लिएर प्रहरीले उनलाई थुनामा राखेको छ । लामिछानेको विषयमा समाज दुई कित्तामा विभाजित छ । उनलाई मनपराउनेहरुले लामिछानेलाई देवत्वकरण गरेका छन् भने र उनलाई मन नपराउनेहरुले अपराधीको दर्जा दिदैं आएका छन् ।
पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुघि रेकर्ड गरेको भनिएको अडियो भिडियोमा पटकपटक रवि लामिछाने र उनको समूहलाई मुछेका कारण स्वभाविक रुपमा उनी अनुसन्धानको दायरमा छन् । र, शंकाको घेरामा पनि । अनुसन्धानको पाटोका रुपमा अनुसन्धानकर्ताले पक्कै यी सबै पाटोको विषयमा अध्ययन गर्ने नै छ ।
भिडियोमा आत्तिएर आत्महत्यामा पुगेका पुडासैनीको मनस्थिति, उनले प्रयोग गरेका शब्द, बाह्य व्यक्तिको प्रभाव वा दबाब आदिका विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । उनले भिडियोको सुरुमा प्रयोग गरेको भाषागत लवज बीचमा अन्य व्यक्तिको जस्तो सुनिने आवाज (८ मिनेट ४६ सेकेण्डमा सुनिने किन भन्ने प्रश्न) जस्ता शब्दहरुको व्यापक विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
आखिरमा कुनैपनि व्यक्तिले अर्काेलाई बद्नाम गर्न मात्रै आत्महत्या गर्ने कुरा जति नै अस्वाभाविक छ, त्यति नै अस्वाभाविक उनको हतास मनस्थितिले देखाउ“छ । योजनाबद्ध आत्महत्या थिएन वा अन्य कुनै बाह्य व्यक्तिको दबाब वा प्रभाव थिएन भने एउटा आत्महत्या गर्न लागेको व्यक्तिले त्यति लामो सयममा मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आउने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन । यी विषयको प्रहरी अनुसन्धान र अदालतमा समेत विस्तृत व्याख्या होला नै ।
चर्चित भिडियोमा लामिछाने र उनको समूहका कारणले पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुको कारण खुलाएकोले प्रहरीले यो विषयलाई चासोका साथ हेर्नुपर्छ र गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक अनुसन्धान नगर्ने हो भने अबका दिनमा आत्महत्याका घट्नाहरु बढ्न सक्छन् । पुडासैनीले चितवनको नारायणगढस्थित होटल कंगारुमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए तर किन उनी त्यही गएर आत्महत्या रोजे भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको पाटो बन्नुपर्छ । किनभने आत्महत्याको सामान्य नियम आफ्नै घरमा अन्य व्यक्तिको आँखा छलेर गर्ने मृत्युवरण हो । यो सिद्धान्तका विषयमा पनि फौज्दारी न्यायविद्हरुले अदालतमा विश्लेषण गर्लान् र अदालतले समेत व्याख्या गर्ला नै ।
सार्वजनिक भएको अडियो टेपमा भएको विवरण अनुसार कतिसम्मको हरकत रवि लामिछानेहरुले उनीमाथि गरेका रहेछन् भन्ने कुरा सर्सती सुन्दा स्पष्ट हुन्छ । सो अडियो टेपमा भएको विवरणमा भनिएको छ, ‘मलाई रवि लामिछाने र दिपक दाजुले पछिल्लो पटक धेरै नै टर्चर दिनुभयो । उहाँहरुले करोडौं कमाउने तर मलाई कममात्रै पैसा दिने । पछि मलाई डिपेण्डेण्ट भिसामा अष्ट्रेलिया पठाइदिने भनेर एउटा केटीको पछि लगाए । तर त्यहि क्रममा मैले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडे पनि । र, पछिसम्म मलाई उहाहँरुले त्यहि केटीलाई बलात्कार गरेको भनेर फसाउने षडयन्त्र रणनीति पनि बनाउनुभयो । त्यसकारण म अब यस संसारमा यस्तैगरी बाँचिरहन चाहन्न ।'
तर जब भिडियोको अन्त्य अन्त्यतिर पुगिन्छ, आफूले करोडौं कमाएको र आफ्नी पत्निले सोको पूरै हिस्सा पाउने शब्दहरुको प्रयोग सुनिन्छ त्यसबाटै उनको भनाइमा एकरुपमा (कन्ट्राडिक्सन अफ कन्सिन्टेन्शी) अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो पाटोमा पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । भाईहरुले सम्पत्ति खोज्न नपाउने र पत्निले पुरै हिस्सा पाउने कुरा उनले किन गरे जबकी उनले पहिल्यै आफू क्रृणमा डुबेको र राम्रो आम्दानी गरिरहेको व्यक्तिलाई फकाएर लामिछाने र उनको टीमा आफूलाई फसाईसकेको उल्लेख गरेका छन् । भिडियो आफैँमा रहस्यको अर्काे विषय त छँदैछ ।
नुवाकोट बेलकोटगढी वडा नं. ३ मा स्थायी घर भएका पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्याको बाटो रोजेको विषय राजनीतिक, कानुनी र पत्रकारीता क्षेत्रमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ । लामो समय सीधा कुरा जनतासंगको टीममा बसेर काम गरेका पुडासैनीले सो टीमसंगको खटपटका कारण केहीसाता अघि मात्रै माउण्टेन टेलिभिजनमा अनुबन्धित थिए भनिएको छ । तर टीम छाडिसकेकका व्यक्तिले लामिछानेलाई कहिले ‘रवि दाई‘ र कहिले ‘रवि तिमी‘ भन्ने शब्दको प्रयोगबाट आदरार्थी शब्दको प्रयोगमा आएको असन्तुलनले पनि भिडियोलाई रहस्यमय बनाइदिएको छ । जसका कारणले मर्नुपर्ने बाध्यतामा पुडासैनी पुगेका थिए किन उनले आत्महत्याको कारक मानिएको व्यक्तिलाई ‘रवि दाई‘ भनी आदरार्थी शब्दको प्रयोग गरे ? हतास मनस्थितिका कारणले मात्रै उनले त्यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेका थिएनन कि?
भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीहरुले एकपछि अर्काे गर्दै आत्महत्या गरिरहेको श्रृखंलामा पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्याको विषय नितान्त फरक छ । कसैको दबाब र प्रभावमा समेत आत्महत्या गरेमा त्यस्तो आत्महत्या गर्ने कार्यमा उक्साउने व्यक्तिलाई सजायको भागी बनाउनुपर्ने कानुन लागू भइसकेको छ । तर त्यस्तो कानुनको प्रयोग अब कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषय नै यो प्रकरण एउटा ‘टेस्ट केस‘ हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ ले कुनै व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन दिई आत्महत्या गराएमा त्यस्तो दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई पा“चबर्ष सम्म कैद र पचार हजार रुपैया“सम्म जरिवाना हुनसक्छ भनिएको छ ।
उपदफा (१) मा स्पष्ट भनिएको छ कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था उपदफा २ मा छ । आत्महत्याको विषयको यो पहिलो मुद्दा भएकोले अनुसन्धान र अदालतको फैसला समाजमा एउटा नौलो अभ्यास हुनेछ ।
यसअघि पनि चर्चित आत्महत्याहरु नभएका होइनन् । अख्तियारले मुद्दा चलाउ“दै गर्दा कर्मचारीले गरेको आत्महत्या होस् वा सर्वाेच्च अदअलतमा पूर्व न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले गरेको आत्महत्या नै किन नहोस् सबै चर्चामा त थिए तर अनुसन्धानको पाटो कहिल्यै बनेनन् । अखबारमा फोटो छापिएका भरमा पत्रकारलाई लामो समय यातना दिइएको विषय नायिका श्रीशा कार्कीले गरेको आत्महत्या इतिकासको विषय बनीसकेको छ । त्यस आत्मकत्या काण्डले पनि ठूलै चर्चा पाएपनि कसैलाई पनि गंभीर सजाय भएको थिएन ।
एकबर्षअघि नै जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताले आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई रोकेपछि यो एउटा अपराधको विषय बनेको छ । तर आत्महत्या गर्ने र मालिकलाई वा आफूलाई काम लगाउने व्यक्तिलाई दोष थोपर्दै आत्महत्या गर्दै जाने र त्यसको भागी दोष थोपरिएको व्यक्ति बन्दै जाने हो भने न्याय व्यवस्था कहाँ पुग्ला । पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या पनि कानुन कार्यान्वयन निकायको लागि गलपासो त बन्दैन ?